Kaankarada naasaha oo ey kor u kaceen tirada dadyoowga qaba - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaankarada naasaha oo ey kor u kaceen tirada dadyoowga qaba
La daabacay måndag 24 juni 2013 kl 13.30
Muddo shan sannadood ah ayay kor u kacday 20% tirada dadyoowga laga helo cudurka kaankarada naasaha. 8 000 oo haween ah ayaa sannadkii lagu ogaadaa baaritaan iney cudurka qabaan, waana tiro kor u sii kacda sannadba, sannadka ka dambeeya, sida uu qoray war-geeyska Sydsvenskan.
- Nasiib-darro maaha mid uu shaki ku jiro kor u kaca tirada dadyoowga u xanuunsada cudurka kaankarada naasaha, waana mid loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa, sida uu sheegay Signe Borgquist, oo ka howl-gala jaamicadda Lund, mar uu u waramayay war-geeyska Sydsvenskan.
Da'da bulshada oo kor u sii kaceeysa ayaa ka mid ah sababaha loo aaneeyneyo. Kor u kaca tirada dadyoowga tijaabooyinka laga qaado iyo is-bedel ku dhacay hab-nololeedkii bulshada ayaa ah midda labaad ee loo aaneyneyo.